Warkii ugu farxadda badnaa abid oo u soo yeeray beeraleyda Soomaaliyeed - Caasimada Online
Home Warar Warkii ugu farxadda badnaa abid oo u soo yeeray beeraleyda Soomaaliyeed
Warkii ugu farxadda badnaa abid oo u soo yeeray beeraleyda Soomaaliyeed
Nairobi (Caasimada Online) Markii ugu horreysay ayaa beeraleyda Soomaaliyeed waxa ay suuq fiican u heli doonaan dallaga ka soo go’a beerahooda.
Arrintan ayaa daba socota kaddib markii Midowga Yurub,dowladda Austria iyo hey’adda beeraha iyo cuntada ee QM isku raaceen in ay taageeraan beeraleyda Soomaaliyeed.
Beeraleyda Soomaaliyeed ayaa laga caawin doonaa sidda ay u heli lahaayeen qalab tayo leh oo ka caawiya wax soo saarka beerahooda, taasoo muujineysa in dadka Soomaaliyeed ay helaan raashin xilli dhow la soo gooyay, halkii ka horre ay ahayd in dalka la keeno raashi xillo horre la soo saaray.
Hey’adda cuntada iyo beeraha ee Qaramada Midoobay FAO iyo Barnaamijka cunta adduunka ee WFP ayaa go’aan ku gaaray in ay dhiiri galiyaan beeraleyda Soomaaliyeed, kuwaasoo horrey ugu eedeeyay labada hey’addood in ay raashiin keenaan marka ay soo go’ayaan dallagooda, taasoo dhibaato ku ah wax soo saarkooda.
Midowga Yurub iyo dowladda Austria ayaa iyana ballan qaaday in ay beeraleyda Soomaaliyeed ka caawin doonaan siddii ay u soo saari lahaayeen dallag fiican.
Wakiilka WFP u qaabilsan Soomaliya, Stefano Porretti ayaa ku qeexay barnaamijkan cusub mid wax badan ka caawin doonaan beeraleyda Soomaaliyeed in soo saaraan dallag fiican waa guul buu yiri.
“WFP waxaa ka go’an in ay caawiso dadka xoolaha leh iyo kuwa beeraha ku howlan,” ayuu yiri Porretti.